TIM Tolagnar : Avereno eny Faravohitra i Dada - Actus Mada
TIM Tolagnaro : Filoha Ravalomana Marc mody ao Faravohitra no laharam-pahamehana amin'ny T.I.M.
Avereno ao amin ny trano fonenany ao Faravohitra ny Filoha Ravalomanana. Aza asiana kajikajy politika ny fampihavanam-pirenena. Mankahery ny F.F.K.M. hanohy ny dingana efa natomboka....Fifanakalozam-baovao Ireo nohevitra nivoitra nandritra ny fivoriana nataon ny fianakaviam-ben ny tiako i Madagasikara tany Tolagnaro ny sabotsy teo. Fivoriana nsndraisan'ireo mpitolona maro any an-toerana.Tao amin'ny foibe toerana ny antoko ao
Vory maro tao Bazaribe,foibe toerana ny tiako i Madagaikara, tao amin'ny trano fonenan'i Mosa Tahiry, senatera sady cst teo aloha ary mpandritra ny Antoko TIM. Nambaran ireto mpikambana Tim ireto fa tsy vaha olana hiverenan'ny filaminana ny fitazonana ny filoha Ravalomanana Marc sy Jean Marc KOUMBA sy ireo mpiasan'ny ACM efa ho iray Volana Mahery any Diego. Mitaky izy ireo ny hamerenan'ny fitondrana ankehitriny any amin'ny an-trano fonenany Faravohitra,ny hamotsorana tsy misy fepetra an i Jean Marc Koumba sy ireo mpissan'ny A.C.M. any amin'ny fianakaviana.Lalana mitaroka sahady amin'ny fampihavanam-pirenena izany. Mahasika izay fampihavanam-pirenena izay tsy nisorona ireo mpikambana tiako i Madagasikara any Tolagnaro ireto fa tokony hisy kajikajy ny fanatanterahana ny fampihavanana.Tsy tokony havily lalsn-kafa na avily lalana izy Io.Samy tomponandraikitra amin izao zava-misy iainan'ny malagasy izao izy filoha dimy lahy.Samy tsy misy afa-bela. Avelao hiasa malalaka ny FFKM. Raha ny fanehoan-kevitr'ireo milaza azy ho mpiaro ny safidim-bahoaka sy ny ara-dalana no zohina tsikaritra fa sadasada manatsoratra Ihany. Nanana ny anjaran-toerany Ihany koa ny fifampizarana vaovao mahakasika ny antoko, ny zava-misy any an-toerana. Nohamafisin'ireto mpikambana tim ireto fa i dada Ihany no vaha olana amin zao fijsliana mahazo ny malagasy zao.Nitarika ny fotoana ny senatera sady cst teo aloha, Mosa Tahiry sy Mahazovelo Raymond filohan ny tiako i Madagasikara any an-toerana.